Làlam-pitetezana vaovao: Mandany vola be amin'ny dia sy mpandeha tsy voamarina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Làlam-pitetezana vaovao: Mandany vola be amin'ny dia sy mpandeha tsy voamarina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nanjary lafo sy tsy azo antoka intsony ny dia, toa ny fikarohana farany.
Ny fandaniana amin'ny dia dia nitombo $ 330 isaky ny dia noho ny fitakiana fidirana mifandraika amin'ny COVID-19.
58 isan-jaton'ny Amerikanina nandeha tany ivelany tamin'ity fahavaratra ity dia tsy nanao vaksiny, araka ny fikarohana.
47% ny an'arivony taona no tsy nety nandeha satria be ny vidiny, raha 25% kosa matahotra ny handeha miaraka amin'ny zaza tsy vita volo.
Valo ambin'ny folo volana taorian'ny nanombohan'ny valanaretina coronavirus dia nanokatra sisin-tany ho an'ireo mpandeha ny firenena. Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nahitana fironana fitsangatsanganana vaovao sy vao misondrotra, izay nanjary lafo sy tsy azo antoka noho ny hatramin'izay ny dia.
Ny fanadihadiana dia nanadihady angona avy amin'ireo mpandeha maherin'ny 3,500 izay nankany ivelany mba hahatakarana ireo lamina fitsangatsanganana vaovao eo amin'ireo Amerikanina.
Ny fandaniana amin'ny dia dia nitombo tamin'ny $ 330 isaky ny dia noho ny fitakiana fidirana mifandraika amin'ny COVID-19, ary toy izany koa ny tsy fahazoana antoka, miaraka amin'ny 41% ny mpandeha no mandray anjara mavitrika amin'ny vondrom-piarahamonina mpitety faritany mifandraika amin'ny diany.
Fanampin'izany, 58% amin'ireo mpandeha amerikana no tsy voamarina, ary ny toerana mahazatra indrindra dia ny Meksika (37%), Gresy (19%), Repoblika Dominikanina (12%), Bahamasy (11%), ary Aruba (13%), ary Costa Rica (8%).
Valin'ny fanadihadiana lehibe
58% ny Amerikanina izay nitety tany ivelany tamin'ity fahavaratra ity dia tsy vita vaksiny. Rehefa nanokatra ny sisin-taniny ireo firenena, dia niverina tamin'ny lamina fitsangatsanganana toy ny teo aloha ny COVID-19 ireo mpandeha tsy nanao vaksiny.
Mirongatra ny mpandeha taloha miaraka amina 50+ ampahefatra. Anisan'ireo fiovan'ny demografika hafa, 47% an'ny millennial no tsy nety nandeha noho ny vidiny lafo, raha 25% kosa matahotra ny mandeha miaraka amin'ireo zaza tsy vita volo.
Florida no foiben'ireo mpandeha tsy vita volo: 20% amin'ireo mpandeha amerikana tsy vita volo no mipetraka any Florida. Ny fanjakana 4 amerikana ambony tamin'ny tranga COVID-19 mavitrika dia nitarika ny kitapo ho an'ny fitsangatsanganana ivelany indrindra teo amin'ireo Amerikanina tsy nasiana tondro. Florida dia nitana ny ankamaroan'ny mpizahatany tsy voasivana, arahin'i Texas, New York, ary California.
Tsy mahomby ny fitsangatsanganana: mandany adiny 5 mahery ny mpandeha tsirairay hamaritana ny takiana amin'ny fidirana sy ny famenoana ny antontan-taratasy. Ho fanampin'izany, 23% amin'ireo mpandeha milaza fa nifandray tamin'ny seranam-piaramanidiny, hotely, "na sehatra fivezivezena izy ireo mba hahatakarana ny fepetra takiana amin'ny fidiran'ny seranam-piaramanidina amin'ny ora fiandrasana.
Ity fanadihadiana ity dia manasongadina ny fomba tsy mahomby napetraky ny governemanta. Na dia takatra aza fa misy ny takiana mba hitazomana ny COVID-19, ny firenena dia tsy maintsy mandrindra ny fizotrany. Rehefa mitady hanavao ny fizahan-tany ny firenena, dia manadino ny fiantraikan'ny rafitra haingana sy mahomby ary ny fizotrany mazava sy mora takarina.
Ny firenena dia nanolotra karazana fepetra takiana hidirana, ka lafo kokoa ny mandeha lavitra noho ny hatramin'izay. Amin'ny salan'isa, ny sarany fanampiny dia manampy hatramin'ny $ 330 isaky ny mpandeha ary mahaforona visa COVID-19, fiantohana fitsangantsanganana ary fitsapana COVID-19. Ho fanampin'izay, 79% ny mpandeha no naneho ny fahasosoran'izy ireo tamin'ny tsy fahampian'ny nambaran'ny trano fandraisam-bahiny sy ny seranam-piaramanidina momba ny saran'ny fandehanana amin'ny dia lavitra, hahitako azy ireo taty aoriana rehefa tsy safidy ny fanafoanana.
Ny visa COVID-19, fantatra koa amin'ny hoe visa ara-pahasalamana, dia visa vaovao ilain'ny mpitsangatsangana. Na dia elektronika aza izy ireo dia tsy eo noho eo ny fankatoavana. Mandinika ny fampiharana tsirairay ny manampahefana; Andro vitsivitsy monja alohan'ny dia dia azo alefa izy ireo ary tsy afaka.